Aqoonkaab Sawir-gacmeed iyo Tuug – W/Q. Sakariye Waddani | Aqoonkaab
Sawir-gacmeed iyo Tuug – W/Q. Sakariye Waddani
Jun 06, 2016Arrimaha bulshada
Wardi waa arday jaamacadeed dhalinyar, oo 22 jir ah, caadana ka dhigtay akhrinta casharrada jaamacadda habeen kasta. Waxa uu xoogga saari jiray sawir gacmeedka oo uu aad
caan ugu ahaa, xataa heer uu ka gaadhay inuu ku shaqaysto oo uu lacag ku qaato.
Habeen ka mid ah habeennadii uu akhrin jirey casharka jaamacadda ayaa waxa uu maqlay qof ka sanqadhaya gudaha beerta aqalkooda. Si degdeg ah ayuu uga soo baxey qolkii uu fadhiyey, dabadeedna u soo boodey si uu u ogaado qofka uu yahay. Si lama filaan ah ayuun buu u arkay qof u soo cararaaya dhiniciisa. Isla ilbidhiqsiyo gudahood ayuu ugu tuuray Wardi dhinacaa iyo albaabkuu ka soo baxay oo ah kadinka ku yaal dhabarka danbe ee gurigooda.
Wardi se waxba ma noqon. Laakiin waxa uu ka cabsi qabey in ninkan qalaad ee aanu garaneynin ku soo noqdo oo mar kale waxyeello gaadhsiiyo, ninkan Wardi tuureyba illayn war kama hayee waa tuugta kuwa loo yaqaan cawjadlayaasha ee jabsada bakhaarrada iyo guryaha.
Ka dib markii ninkan tuugga ahi aqoonsadey in sanqadhiisa lagu soo toosey ayaa waxa uu damcey inuu ku baxsado baaskiilad taallay gudaha beerta guriga. Nasiib darro se baaskiiladdii way u dhaqaaqi weyday, sababta ugu weynina wax ay tahay shaagagga baaskiiladda oo banjarsanaa awgood. Dhib kasta ha soo martee ninkii tuugga ahaa baxsey, Wardina garaac ciidamada hawlgalka Booliska si ay u soo qabtaan tuugga, isla markaana uga war hayaan si aanu mar kale ugu soo noqon guriga, isagana aanay waxyeello ugu geysan. Markii Booliskii yimi ayaa taliyihii ciidanku waydiiyey Wardi bal inuu u sheego caynkuu u eekaa tuuggu, si ay ciidamadu u soo qabtaan.
Laakiin Wardi haba yaraatee ma siin taliyihii wax jawaab ah, hase ahaatee waxa uu soo qaatey qalin qoran iyo waraaq. Dabadeed wuxuu si dhab ah u sawiray wajiga cawjadlihii (tuuggii). Isaga oo caddaynaya dharkiisa, alaabtii ugu jirtey jeebadda sare ee shaadhka nooca kabihiisa iyo waliba shaarubo dhaadheer oo cirro leh. Waxa uu intaa ku darey Wardi sawirkii nabar dhiigaaya oo ku yaal gadhka ninka tuuga ah. Silsilad ka lulata jeebadda danbe gaar ahaan ta bidix ee surwaalka iyo waliba isha oo uu dabaayay. Muraayadda uu gashanaana badh ayaa jabnaa, wuxuu lahaa dalbo marka uu soconaayo, dhoollihiisa badh baa iyana jabnaa waanay raarnaayeen, dhabarka danbe ee shaadhkiisana waxa ku yaallay layman iyo xarriijimo ku qoran qalin, xoogey dillaacana waa ku yaalley, garanka uu xidhnaana wuxuu ahaa mid khafiif buluug ah oo usgag ah.
Wardi wuxuu sawir gacmeedkii u dhiibey askartii, waxaaney ka tageen iyaga oo la yaaban habka loo dhigey sawirka. Ka hor intii aaney badinin ama koobiyeyn sawirkii tuugga, si ciddii aragtaa u soo sheegto, ayaa waxay ciidankii fadhiisteen meherad shaaha lagu iibiyo (maqaaxi). Sawir gacmeedku waxa uu u muuqday in wajiga tuuggu ahaa mid coodh coodhsan, gacanta bidixna ku sita ul yar oo balaastrig ah.
Booliskii waxaysi dhab ah u arkeen tuuggii cawjadlaha ahaa oo lugaynaya waaney soo dhinac istaageen tuuggii iyaga oo la amakaagsan! Sawir gacmeedkan la midka ah ninkan ay hor taagan yihiin ee tuugga ah, oo aad mooddo in lagu sawiray kamarad digital ah, waxaaney yidhaahdeen ciidankii: ‘Sawir gacmeedku waa kamarad ama sawir qaade dhab ah oo soconaya ama lugaynaaya, oo daah ka saaran yahay bulsho weynta’ sidaasna waxay ku xidheen tuuggii is lahaa wax korodhso.
Previous PostSababaha keena guusha dardaaranki cumar bin khadaab (RC) Next PostRamadaanta iyo Caafimaadka Qofka Sooman